Ubuhlungu inkaba - Izimbangela
Uma isisu esibuhlungu esifundeni inkaba - kusho ukuthini? Yiqiniso, impendulo yalo mbuzo ungayithola kuphela udokotela emva ukuxilongwa okujuli-. Phela ubuhlungu kule ndawo kungase kubonise zokugula cishe noma isiphi isitho esiswini. Ngakho-ke, uma uba emizweni enjalo esiswini kumele uxhumane isikhungo sokwelapha.
Ukuze izifo ezihlukahlukene izibilini libhekene eyodwa noma nezinye ubuhlungu ezindaweni ezithile, okuyinto Nokho, akusho ngaso sonke isikhathi uqondane indawo emzimbeni ukuhlupheka. Lapho izikhalazo yokuthi ogulayo uphelelwa ubuhlungu inkaba kuyadingeka ukuze ucacise lapho basuke bagxila - ngaphezu inkaba, ngezansi noma eduze nayo. Ngaphezu emkhakheni, odinga ukukwazi uhlobo kanye nesikhathi.
Ubuhlungu inkaba libonisa ezihlukahlukene izifo ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu.
Lokhu kungaba ischemia wamathumbu, izifo emathunjini esikhulu ingemuva. Kulezi izifo ukungakhululeki kanzulu nangaphezulu inkaba.
Ubuhlungu endaweni inkaba kuyinto ejwayelekile i hernia enkabeni. Kulokhu, kungase kube ebukhali ubuhlungu, ukuqumba, isicanucanu, izinkinga isihlalo.
Esinye isifo lapho neprityanye emizweni ubuciko - enteritis ezingamahlalakhona. Sekube zibuthuntu ezidabukile ubuhlungu esiswini, ukuvuvukala, ukungakuthandi ukudla, umuzwa wobukhulu, sibi emva kokudla.
Ngo appendicitis acute, ubuhlungu kungenzeka bagxila iyiphi indawo besisu, kuhlanganise emhlabeni inkaba. Nakuba ngokuhamba kwesikhathi ke ayisekho wazizwa kwesokudla.
Ubuhlungu endaweni inkaba angemukela futhi volvulus - isifo oyingozi ukuthi kuhambisana ukuqunjelwa, ukuhlanza, ukubuyisa, cramping.
Lokhu uphawu ubuhlungu emhlabeni inkaba, kuyisici esihlupha umdlavuza emathunjini amancane. Ngaphezu kwalokho, lapho ukugula kube kuncipha elibukhali isisindo, ukungakuthandi ukudla, isicanucanu, ukuqunjelwa, amajaqamba.
Uma ubuhlungu bagxila ngezansi inkaba, abesifazane lokhu kungase kubonise izifo gynecological. Sikhuluma endometriosis, lesizalo fibroids, umdlavuza wesibeletho, umdlavuza kwesibeletho.
Ubuhlungu ngezansi inkaba kungenzeka khona cystitis - isifo esithathelanayo kwesinye.
Uma wagxila ngenhla, bese sikhuluma izifo ze-isisu, le gallbladder, le duodenum.
Lokhu kungaba kolwelwesi noma ukuvuvukala mucosa esiswini. Lolu hlobo ubuhlungu kwenzeka isilonda lapho esiswini kanye isilonda duodenal. Isilonda kuyinto enenxeba elivulekile ukuthi kwenzeka ngenxa izilonda mucosal, imisipha esiswini futhi imithambo yegazi.
Ukuze uthole isifo esabekayo njengoba umdlavuza isisu ngokuvamile libhekene ubuhlungu esifundeni ngaphezu inkaba. Ngakho-ke kubalulekile ukuba ukuqapha indawo yabo.
Ubuhlungu inkaba kungenzeka migraine lapho besisu. Nalesi sifo kukhona okukhulu ubuhlungu paroxysmal uhlamvu imisipha amajaqamba odongeni kwamathumbu. Ngaphezu kwalokho, saphawula izimpawu ezifana isicanucanu, uhudo, abandayo bese kuba ndikindiki emikhawulweni, pallor. Ukungakhululeki kungenzeka amahora ambalwa, noma izinsuku ezimbalwa. Ukugula landile phakathi intsha.
Soreness ku inkaba kungenzeka ngesikhathi sokukhulelwa. Esesiswini kwesikhathi ukukhula, le mizwa abahlangene ukungezwani isikhumba futhi akufanele sikwethuse. Imbangela ubuhlungu kungenzeka buthaka odongeni kwamathumbu. Futhi ngesikhathi ukhulelwe awokuthi okuvela hernia enkabeni. Ngakho-ke, noma kunjalo, uma ubhekana nanoma yiziphi ukungakhululeki kulesi sikhundla Kuyaphuthuma ukuba aye kudokotela.
Ngakho, noma iyiphi ubuhlungu inkaba kufanele kube iphaphame, njengoba kungase kubonise isifo esiyingozi kwezitho etholakala ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu. Asikho isidingo baqagela bese ulinda, lapho ijika izibonisi, kufanele ngokushesha aye emtholampilo.
Wezinzwa Okuhle (eMoscow): isilinganiso ukubuyekezwa. Lokho ephatha wezinzwa, yini izimpawu ukuxhumana? wezinzwa okukhokhelwayo
I-Cream "Effektum": ukubuyekezwa kodokotela. I-Effetum Cream yamalungu
Baranov Viktor Ivanovich: Biography, izithombe kanye amaqiniso athakazelisayo ngokuphila we counterfeiter
Lamanzi esiphethu "seltzer": labo abangenandaba ukuphuza
Cabanga ngalokho ingabe amabhuku 100 ukuthi kumele ufunde nalowo kithi
Comfrey. Ukusetshenziswa izitshalo
Astrology Futhi Impilo
Ukukhetha namafutha chainsaws